Ọkara & Cell Ngwaọrụ | China Ọkara-Cell Solar Panel Factory
MY SOLAR M3 Half Cell Solar Pv Panel 5bb 6bb 9bb 39bb 390w 395watt 400wp 405 Watt 410 w Perc Solar Pv Module
AMAOKWU 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar anyanwụ cell nakweere teknụzụ ohuru iji melite arụmọrụ nke modulu, na-enye ọdịdị dị mma kachasị mma, na-eme ka ọ dị mma maka ntinye ụlọ. Ọdịdị dị elu nke kachasị elu ntụgharị ntụgharị (ruo 20.38%) na-erite uru site na ọkara sistemụ cell (njirimara na-eguzogide ala). PID Nguzo Magburu onwe ya Anti-PID arụmọrụ nkwa mmachi ike emebi maka uka mmepụta. Low-ìhè Performance Advanced iko na cell elu te ...
MY Anyanwụ M6 Ọkara Cell Mbara Igwe Pv 5bb 6bb 9bb 4bb 430w 435watt 440wp 445 Watt 450 w 455 w Perc Solar Pv Module
AMAOKWU NKE 6/9/12 Busbar Solar Cell 6/9/12 busbar anyanwụ cell na-anabata teknụzụ ọhụrụ iji melite arụmọrụ nke modulu, na-enye ọdịdị dị mma kachasị mma, na-eme ka ọ dị mma maka ntinye ụlọ. Ọdịdị dị elu nke kachasị elu ntụgharị ntụgharị (ruo 20.38%) na-erite uru site na ọkara sistemụ cell (njirimara na-eguzogide ala). PID Nguzo Magburu onwe ya Anti-PID arụmọrụ nkwa mmachi ike emebi maka uka mmepụta. Low-ìhè Performance Advanced iko na cell elu ...
MY Anụ M3 Ọkara 120 Mbadamba Anyanwụ Pv Panel 5bb 6bb 9bb 325w 330watt 335wp 340 Watt 345 w Perc Solar Pv Module
AMAOKWU 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar anyanwụ cell nakweere teknụzụ ohuru iji melite arụmọrụ nke modulu, na-enye ọdịdị dị mma kachasị mma, na-eme ka ọ dị mma maka ntinye ụlọ. Ọdịdị dị elu dị elu nke ntụgharị ntụgharị arụmọrụ (ruo 20.45%) na-erite uru site na ọkara sistemụ cell (njirimara na-eguzogide ala). PID Nguzo Magburu onwe ya Anti-PID arụmọrụ nkwa mmachi ike emebi maka uka mmepụta. Low-ìhè Performance Advanced iko na cell elu t ...